တွေးမိတွေးရာ ဒီတစ်ပါတ်မှာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တွေးမိတွေးရာ ဒီတစ်ပါတ်မှာ…
Posted by kolumbus on Oct 13, 2013 in Creative Writing, Think Different | 13 comments
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းတွေဖတ်ရင်း သတိပြုမိတာကတော့ ကုလားနဲ့မလုံလောက်ရင် တရုတ်အရေးလာမယ့် သဘောတွေတွေ့ရတယ်။ ရခိုင်အရေး၊ မြစ်ဆုံအရေး၊ လက်ပံတောင်းအရေး၊ ကျောက်ဖြူအရေး၊ မိတ္ထီလာအရေး၊ မိုးစက်ဝိုင်အားလုံးဟာ တစ်နေရာမှာ မြစ်ဖျားခံနေတယ်ဆိုတာ သတိပြုမိကြမှာပါ။ တစ်နည်းဆိုရရင် turning point တွေပါ။ ဒီတစ်ပွိုင့်မှာ မလှည့်ရင် နောက်တစ်ပွိုင့်မှာလှည့်အောင် ကြိုးစားကြမှာပါ။ ဒီ turning point တွေမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့ ဘက်ကိုလှည့်အောင် ကြိုးစားကြသလို၊ ကျနော်တို့ကလည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဘက်ကို လှည့်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်အရ တည့်တည့်သွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူတို့က ဘယ်ဘက်ကိုလှည့်ရင်၊ ကျနော်တို့က ညာဘက်လှည့်မယ်။ သူတို့ကညာဆိုရင် ကျနော်တို့ကဘယ်၊ သူတို့ဆွဲတဲ့ဘက်ကို မကွေ့ဖို့လိုတယ်။ အဓိက က ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ပါ။
မိုးစက်ဝိုင် ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင် မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်တွေ စနိုးစနှောင့်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ No Big Deal ပါ။ အခုထက်ပိုပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ်လို့ သတိပေးလိုက်တာပါ။ မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်တွေဟာ သဘောထားကြီးကြောင်း၊ ပြည်မကြီးက တရုတ်တွေနဲ့ မတူကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်ကို နိုင်ငံတကာ မှာ မြှင့်တင်တတ်ကြ ကြောင်း ပြသနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးပါပဲ။ ဝူရှူးမှာ ရွှေတံဆိပ်ရခဲ့တဲ့ ခိုင်ခိုင်မော်လို မြန်မာပြည်ဖွား တရုတ်တွေ အများကြီးလိုပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့ အတွက် တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ လုံးဝမပတ်သက်ဘူးလို့တော့ မပြောနိုင်ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အသုံးမကျညံ့ဖျင်းတာတွေ့ရင် အရင်အဆဲခံရတာ ဒီကလူတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက် သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်။ မြန်မာပြည်အပေါ် တရုတ်နိုင်ငံက အနိုင်ကျင့်တာ လူလည်ကျတာတွေကို ဒီကတရုတ်တွေကပါ ကန့်ကွက်တာ ဆန့်ကျင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။
တရုတ်ထက် ကုလားကပိုခံစားရပါတယ်။ ကုလားဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒီထက်ပိုပေါ်လွင်တဲ့ စာလုံးမသိလို့ပါ။ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်တဲ့ ကုလားတွေရှိခဲ့ ပေမယ့် မလုံလောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကုလားတွေလည်း လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ဗလီတွေမှာ ဆွမ်းကပ်လာကြတာတွေဟာ အရင်ကမရှိခဲ့ပါဘူး။ ကုလားတွေကို မြန်မာနိုင်ငံက မောင်းထုတ်ဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့၊ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ကုလားတွေဟာ တောက်လျှောက်ပါနေတာပါ။ သူတို့ကို တစ်ခြားဘာသာတွေနဲ့လိုက်လျော ညီထွေနေတတ်အောင် တောင်းဆိုရင်လုံလောက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
မွတ်စလင်တွေအချင်းချင်းဟာ ညီရင်းအကိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် တစ်ယောက်မကောင်းရင် ကျန်တဲ့သူကိုပါထိခိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဖဂန်မှာ ရှေးအကျဆုံး ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကို ဗုံးခွဲဖျက်ဆီးတာ၊ မာလာလာ လိုစာသင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ ကလေးကို သေနတ်နဲ့ပြစ်တာ၊ ယဉ်ကျေးပါတယ်ဆိုတဲ့ Islam ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုသုံးပြီး လူသတ်နေတာတွေကို မွတ်စလင်တွေကိုယ်တိုင် တတ်နိုင်သမျှ ကန့်ကွက်ကြပါ။ လုပ်တာက သူတို့ ခံရတာက ကို မဖြစ်စေပါနဲ့။
နောက်တစ်ခုက တိုင်းရင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ ကချင်နဲ့ ဝ တွေပါ။ ဝ တွေကို တရုတ်စကားပြောတယ်၊ တရုတ်ပိုက်ဆံသုံးတယ် ဆိုပြီး တိုင်းရင်းသားထဲက ထုတ်ချင်သူတွေကို အရမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်လို့ပြောချင်တယ်။ ဝ ဆိုတာမနေ့တစ်နေ့ ကမှ ပြည်ကြီးကဆင်းလာသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို တိုင်းရင်းသားထဲကထုတ်ရင် သူတို့မြေပါ ပြည်ထောင်စုက ထုတ်ပေးရမှာပါ။ မြန်မာအစိုးရကို မယုံလို့ မြန်မာငွေမသုံး၊ မြန်မာအစိုးရနဲ့မပတ်သက်အောင်နေတာကို နားလည်ဖို့လိုပြီး ပြန်ဆွဲဆောင် စည်းရုံးရမှာပါ။ တကယ်တော့လည်း မြန်မာစာ မြန်မာစကားကိုသုံးတဲ့ တိုင်းရင်းသားဟာ နည်းပါတယ်။
ကချင်တွေကိုလည်းမေးကြည့်ပါ။ ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရကို ဘယ်လူမျိုးဖြစ်စေချင်သလဲလို့။ ကချင်လူမျိုးလို့ပဲပြောကြမှာပါ၊ ဒါဟာ ဗမာကိုမုန်းလို့မဟုတ်ပါ၊ မယုံလို့ပါ။ ဘာကြောင့် မယုံလည်းဆိုတာတော့ သိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့် ယုံကြည်မှုကို နှစ်ဘက်စလုံး ကပြန်တည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒါကို မလုပ်ပဲ KIA ကို စစ်တပ်က မချချင်လို့ လွှတ်ပေးထားတာ KIA ဟာ ကချင်လူမျိုးကို ကိုယ်စားမပြုဘူး ဘာညာဆိုပြီး ဝေဖန်ဆဲဆိုနေကြရင် ရလာဒ်က လိုချင်တာနဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။
အခုဆိုရင်ပဲ မြန်မာနိုင်ငံက အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလက်ခံလိုက်ပါပြီ။ အစိုးရအတွက် အရင်ထက် စိန်ခေါ်မှုများတဲ့ အလုပ်ဖြစ်သလို အရည်အချင်းပြဖို့အခွင့်အရေးလည်းဖြစ်တယ်။ မတူတဲ့လူမျိုးတွေ ကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံတွေ ခြားနားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဦးဆောင်ရမှာပါ။ ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာတောင် ရလာဒ်ကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်ရင် ပြည်ပနိုင်ငံတွေကလည်း ယုံကြည်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခုတောင် သံသယနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။
အချုပ်ပြောရရင် ကျနော်တို့ အခုထက်ပို ရင့်ကျက်ဖို့လိုနေပါပြီ။ ကျနော်တို့ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ လုပ်ရပ်ဟာ နိုင်ငံ့ပုံရိပ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် အရင်ကထက် ပိုပြီး ဂရုစိုက်ဖို့လိုမယ်ထင်တယ်။
ခင်ဗျားတို့ အခုထက် ပို ရင့်ကျက်ဖို့ …လိုနေပါပြီ ။
မျှတတဲ့ အတွေးအခေါ်လေးတွေပါ ကိုလံဘတ်စ်ရေ။
စီနီယာတွေရဲ့ အားပေးစကားကို တန်ဖိုးထားပါတယ်ဗျို့…
ကောင်းပေ့ ဆိုတဲ့ ပိုစ်လို့ ချီးကျူးပါရစေ။
သူတို့ နောက်မလိုက်မိဖို့ ဘယ်ကွေ့ရင်
ညာဘက်ကို ကျတော်တို့ကွေ့ ပါမယ်။ ( ဘယ် = တရုပ်
ညာ = ကုလား ဟု မဆိုလိုပါကြောင်းးး )
သူတို့အများစုကြီးက ဘယ်လိုမှ စနိုးစနောင့်မဖြစ်ပါ။ သိပ်တောင်မသိပါ။
-ဒီလောက်လှတာ တရုတ်အစစ်လဲ မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဘာကြောင့် ဒီလိုပြောနိုင်သလဲဆိုတော့ ကျုပ်ကိုယ်တိုင်က ရန်ကုန်တရုတ်တန်းမှာနေတာပါ။
တရုတ်ပြည်မကြီးက တရုတ်တွေရဲ့ ကောက်ကျစ်မှု့ ကလိမ်ကျမှု့ လူပါးဝမှု့ တွေကို
မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်တွေ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခံခဲ့ရ ခံနေရတာ များလှပါပြီ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ကုန်သည်အများစုက မြန်မာပြည်ဖွားတရုတ်တွေပါ..။
-လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် နှစ်ဆယ်လောက်အတွင်း ပြည်တွင်းဝင်လာတဲ့ ပြည်မတရုတ်တွေကြောင့်
-ဒုက္ခခံရတဲ့ထဲမှာ ပြည်တွင်းတရုတ်တွေလဲ ရှေ့တန်းကပါတာမို့ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးက ပြည်တွင်းတရုတ်တွေဟာ
-တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ ခိုးဝင်တရုတ်တွေကို တော်တော်အမြင်ကတ်ပါတယ်။
သူတို့က တရုတ်တွေနဲ့မတူတာက မူဆလင်ချင်း ဆိုတဲ့ အရာပေါ်မှာ အလေးထားလွန်းတယ်။
ဒီကိစ္စဟာ ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံအပေါ်မှာ သစ္စာရှိ သစ္စာခံဖို့ကျတော့ ကန့်လန့်ခံနေတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒါလေးသတိပြုပြီး ပြည်တွင်း နိုင်ငံသားမူဆလင်တွေဟာ
ကိုယ့်ဟာကိုယ် အုပ်စုဖွဲ့ ကိုယ့်အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲ့ပဲ နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲ
အခြားမြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ရောနှော ပူးပေါင်း နေထိုင်လုပ်ကိုင်ကြတာပိုကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဗလီထဲ ဆွမ်းပင့်ကပ်တာကိုတော့ ကျုပ်က မထောက်ခံပါဘူး..
ဒါက အခြေအနေက အကြပ်ကိုင်လို့ မလုပ်ချင်တာ ဇွတ်မှိတ်လုပ်ရတာ..
အဲဒါကြောင့် ပိုတောင် မုန်းတီးစိတ်နာသွားနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ရဲရဲတင်းတင်း ကိုးကွယ်ပါ
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံနဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းက ခွင့်ပြုထားတဲ့ အတိုင်းအတာကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ကျော်တာတွေ တားမြစ်ပေးပါ။
ဥပမာ ဘာသာရေးစာသင်ကျောင်းကို ၀တ်ပြုတဲ့နေရာလုပ်တာ
ဗလီတွေကို ချပေးထားတဲ့ခွင့်ပြုချက်ထက် ကျော်လွန်ဆောက်လုပ်တာ
ဘာသာရေးအခန်းအနားတွေမှာ ခွင့်ပြုတာထက်ပို လုပ်တာ
အဲဒါတွေက သူတို့ကို လူမုန်းများစေပါတယ်။
ဗုဒ္ဒဘာသာဘုန်းကြီးတွေကို ဆွမ်းပင့်ကပ်တာမျိုးကိုတော့ အစ္စလာမ်ဘာသာက ခွင့်ပြုတာမဟုတ်လို့ မလုပ်စေချင်ပါဘူး။
ဗုဒ္ဒဘာသာကတော့ အခြားမည်သည့်ဘာသာကိုမဆို ၀င်ထွက် ပေးလှူ ကျွေးမွေး တာကို လက်ခံတာမို့ ဗုဒ္ဒဘာသာ ဘာသာရေးကျောင်းကန်ဘုရားတွေကို ဖိတ်ကြားတာရှိရင် ရဲရဲတင်းတင်းသွားပါ။ ကိုယ့်ကိုဖိတ်ကြားသူနဲ့ ရဲရဲတင်းတင်း အတူထိုင် အတူပြောဆိုပါ။ ကျွေးတဲ့အစာကိုတော့ ကိုယ့်စည်းကမ်းနဲ့ညီညွတ်ရင် ရဲရဲစားပါ။ မညီညွတ်ဖူးထင်ရင် ရဲရဲငြင်းပါ။
အရေးကြီးတာကတော့ ခိုးဝင် မွတ်ဆလင်တွေကို အခြားပြည်သူများနည်းတူ ဆန့်ကျင်ပါ။
သူတို့ကြောင့် ခင်ဗျားတို့ နာမည်ပျက် အကြည်ညိုပျက် အနေအစား စီးပွားပျက်ကြရပါတယ်။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက်တွေကို မွတ်ဆလင်စိတ်ဓါတ်ထက် နိုင်ငံသားစိတ်ဓါတ်ရှိစေအောင် ပျိုးထောင်ပေးခဲ့ပါ။
ကျုပ်တို့မျိုးဆက်က ကျိန်စာတွေ နောက်မျိုးဆက်ကို မသင့်ပါစေနဲ့ …..။
တိုင်းရင်းသားကိစ္စတွေကတော့ ပြောလို့လဲ မနိုင်တော့ပါဘူး….
(ဥပမာ – နော်)
ရခိုင်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဗမာက နားမလည်ပါဘူး
ချင်း ရဲ့ ခံစားချက်ကိုတော့ ရခိုင်ရော ဗမာကပါ နားမလည်နိုင်ပြန်ဘူး…
(ခိုးဝင်မဟုတ်တဲ့)ဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ခံစားချက်ကိုတော့ ချင်းရော ရခိုင်ရော ဗမာရော ဘယ်သူမှ နားမလည်ကြဘူး…
ရင်ချင်းလဲမနီးဘူး …. သွေးလဲ မစည်းဘူး ….
အဲဒါကြောင့် အေးချမ်း သာယာမှု့တွေလဲ ဘယ်တော့မှ မရဘူး …..
အားပါး…. ပို့ ထက်ပိုကောင်းတဲ့ ကွန်းမန့်ပါလား။ ကျနော့ ပို့ ကို ခါးနာ၊ လက်ညောင်း၊ မျက်စိအမှုန်ခံပြီး အရောင်တင်ပေးတဲ့ ကွန်းမန့်အတွက် အကျေးဇူး အကြီးကြီးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အတွက်ထက် နောက်မျိုးဆက်တွေကို ပိုကောင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်လေး ကျန်ခဲ့စေချင်ပါတယ်။
တရုတ်မကြိုက်သူထဲမှာ အနော်ကြောင်ကြီး ရှေ့ဆုံးကပါဒယ်.. အရေးကြုံရင် ခေါ်လိုက်…. တရေးနိုးလဲ ထလိုက်မည်…
” ဦးကြောင်က တရုတ် မကြိုက်သူလား…၊ တရုတ်မ ကြိုက်သူလားဟင်… ”
ဘယ်ဒူ့မှ နှစ်သိမ့်လို့ ပြောလို့မရတဲ့ အခြေအနေမို့ …..
လူ တစ်ယောက်ကို ပတ်သက် ဆက်ဆံမိရင်၊
လူ ဆိုတဲ့ တန်ဖိုးလေးထားပြီးးးး
ဦးပါ ရဲ့ကွန်မန့်ကိုပဲထောက်ခံသွားပါဂျောင်းးးးး :hint:
ကျန်သွားလို့ဗျို့…kolumbus က ကွန်မန့်တွေသာပေးနေပြီး
ဒါမျိုးတွေရေးလို့ ဘာမှကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ ကိုယ်ဝင်ပြောတော့ တစ်ဖက်က ပြောတာခဏရပ်သွားတယ်ဆိုတာလောက်ပါပဲ မှန်းပါတယ်။